Amagama ezinja ezingama-35 nezincazelo zamaNdiya (iBaloo, Holi, Karma nokuningi) - Amagama Ezinja
Amagama ezinja ezingama-35 nezincazelo zamaNdiya (iBaloo, Holi, Karma nokuningi)
Usanda kwamukela umngane omusha onemilenze emine emndenini wakho, futhi ubabhekela amagama ezinja zamaNdiya ?!
Ufike endaweni efanele.
Ukukhetha umNdiya igama lenja yakho kuyindlela enhle yokunikeza i-pooch yakho isihloko esinencazelo ethokozisayo.
Ngenxa yokwehlukahluka okukhulu kwezinkolo zaseNdiya, njengobuHindu nobuBuddha, lawa ma-monikers angaba namandla kakhulu ngokomoya. Ngakho-ke lolu hlu futhi luqukethe ezinye izinqumo zokuphosa uma ufuna isihloko somoya noma senkolo.
Ngabe unayo inja edabuka eNdiya, noma mhlawumbe uyayithanda ngempela isiko labo. Noma ngabe siyini isizathu, silapha ukuboleka inqina ekusizeni ekufuneni kwakho igama lenja yaseNdiya.
Hewola ngawe ubheke uhlu lwethu olungezansi?
Amagama ezinja zaseNdiya
Ubuwazi ukuthi i-India ingelinye lamazwe amakhulu futhi ahluke kakhulu emhlabeni?
Futhi banezilimi eziningi ezahlukahlukene kufaka phakathi: isiHindi, isiBengali kanye nesiSanskrit yasendulo!
Ngenxa yalokhu, kunamagama amaningi amahle futhi ayingqayizivele ongakhetha kuwo.
Kepha ungakhathazeki, sikunciphise kwaba okuhamba phambili kuphela, ngakho-ke sinethemba lokuthi uzothola i-moniker oyiphophayo.
Amagama Ezinja Ayizi-10 Aphezulu
I-Baloo - Nasi isihloko esiqinisekile ukuthi nonke nizosibona! IBaloo igama lebhere kusuka URudyard Kipling’s The Jungle Book . Ukuvela egameni lesiHindi elithi bhālū le moniker ngokwezwi nezwi isho ukuthwala! Kuhle kakhulu inja eyazisa izidingo ezingenalutho zokuphila.
Bala - Elinye igama lesiHindu, uBala lisho izinto eziningana. Livame ukuhunyushwa ngokuthi lisho ‘intombazanyana,’ kodwa, libuye lisho futhi ‘amandla namandla.’ Lokhu kungenza ukukhetha okuhle kowesifazane onenkani! Hewola ungamelana kanjani naleli gama uma linakho kokubili i-badass nencazelo enhle ?
UDrisana - Lokhu kungenye yezintandokazi zethu. IDrisana isho ukuthi 'indodakazi yelanga' futhi ingelinye lamagama amahle kakhulu enja yamaNdiya ongayikhethela umngane wakho wesifazane onoboya. Lokhu kuzoba yi-pawfect kumdlwane okuwukukhanya kwempilo yakho futhi oletha ukukhanya kwelanga nokumamatheka lapho kuhamba khona izidladla zabo.
Goa - Kungani ungacabangi ukuqamba igama lomdlwane wakho ngemuva kwesifunda saseNdiya ? Isimo esisogwini oluseningizimu nentshonalanga eNdiya, leli dolobha lidume kakhulu kubantu abathanda amaholide asolwandle anelanga! Lokhu kungaba yisinqumo esihle kakhulu se-canine ethanda ukuthatha ukuhamba ngesihlabathi ngasogwini nomnikazi wayo.
Holi - Leli igama eliphefumulelwe ngokwamasiko ngoba iHoli ngumkhosi wamaNdiya ogujwa entwasahlobo. Eyaziwa nangokuthi 'umkhosi wemibala' noma 'umkhosi wothando' igubha ukuza kweNtwasahlobo futhi igubha uthando, ukuhleka nokuxolela. Ukuqamba igama lakho nge-pooch Holi kungaba yindlela enhle yokukhumbula izinto ezibaluleke kakhulu empilweni.
UJasmine - Leli yigama labesifazane elithandekayo elinoboya obuhle! UJasmine inguqulo yesiNgisi yesihloko sesi-Arabhu esithi 'Yasmine'. UJasmine ubhekisa embali kaJasmine, ngakho-ke kuyisinqumo esihle uma ukhetha i-moniker enencazelo entekenteke nenhle.
I-Karma - Leli yigama sonke esilijwayele; kuhlotshaniswa nakho kokubili ubuHindu nobuBuddha. I-Karma empeleni umphumela wendlela umuntu enza ngayo - wenza okuhle, uthola inhlanhla futhi uma wenza okubi, uba nebhadi! Sicabanga ukuthi iKarma yenza ukukhetha okuhle, njengoba kungenye indlela yokubiza i-pooch yakho ukukhetha okuthandwayo kwenhlanhla.
Masala - Igama eliphefumulelwe ukudla! IMasala iyinhlanganisela yezinongo zomhlabathi ezisetshenziselwa ukupheka futhi mhlawumbe isetshenziswa kakhulu ukwenza i-curry chicken-tikka masala! Lokhu kungaba kuhle ku- hound onobuntu be-sassy futhi linomlilo njengesiqholo!
I-Paneer - Leli gama lesiHindi empeleni livela kwimvelaphi yasePheresiya futhi empeleni lisho ushizi. Yebo, lokhu kungukukhetha kwe-grate kubo bonke abathandi beshizi laphaya ... futhi okungcono kakhulu uma inja yakho imomotheka kamnandi!
UTara - Lokhu kuyindlela emangalisayo kumngane wesifazane onemilenze emine othanda ukuba yinkanyezi yombukiso! UTara usho ukuthi 'inkanyezi' ngesiSanskrit, noma kunjalo, futhi kungunkulunkulukazi wamaHindu owathunjwa uNkulunkulu wenyanga, kwaholela empini enkulu!
Amagama Wethu Ayintandokazi Wenja YamaNdiya
Amaya - Lokhu kuyisinqumo esihle sentombazane. I-Amaya isho ukuthi 'ayinacala' (engenacala) ngesi-Sanskrit, noma kunjalo, ingahunyushwa futhi isho ukuthi 'imvula yasebusuku'. Sicabanga ukuthi kungenza isihloko esithandekayo sokubamba inja encane njenge-terrier.
I-Arjun - Lokhu kungenza moniker emangalisayo ngembobo emhlophe ! I-Arjun igama lesiHindu, elivela eSanskrit, futhi lisho 'okumhlophe okukhanyayo'. Leli igama elidume ngempela eNdiya futhi empeleni linezixhumanisi zenganekwane yaseNdiya, esuselwa ku-Arjuna, indodana yeNkosi Yezithixo.
UChandra - Isi-Sanskrit 'senyanga ekhanyayo' leli gama lenja yaseNdiya linesixhumanisi esibuhlungu ngempela koNkulunkulu! UChandra ungomunye wamaplanethi ayisishiyagalolunye kubuHindu futhi, futhi ungubaba kaBudha (iplanethi i-mercury). Lokhu kungenza ukukhetha okuhle kunoma iyiphi inja efana nempisi ethanda ukukhala enyangeni!
I-Champak - Bewazi ukuthi ekufundweni kwezinkanyezi kwamaNdiya, amagama aqala ngo-'C 'aholela ekubeni namandla amakhulu ngaphakathi kumuntu? UChampak usho ukuthi ‘imbali’ futhi ungumHindu omuhle igama lomdlwane wakho .
Isono - Lesi ngesakho sonke se-foodies laphaya! I-Dosa wuhlobo lwepancake yaseNdiya elungisekayo elingahlanganiswa nakho konke. Yize ungahle ucabange ukuthi kuwubuwula ukubiza umdlwane wakho ngemuva kwepancake, ngokuqinisekile kuhluke kakhulu kunokubiza inja yakho ngokuthi ‘Ibhisikidi’.
I-Falgun - Le moniker ingasetshenziselwa umdlwane womfana noma wentombazane! Leli gama livame kakhulu eNdiya futhi lisho ukuthi ‘inyanga yasentwasahlobo.’ Lokhu kungaba yisinqumo esihle impela uma i-pooch yakho izalwa ngesikhathi sentwasahlobo.
UGaman - Le inketho yokwelashwa kwe-canine yesilisa ethanda i-adventure nokuhlola. Ingabe uthatha i-pal yakho ekukhuphukeni okude? Ngemuva kwalokho lokhu kungukukhetha kwakho. IGamen isho ukuthi 'uhambo' ngesiHindi, ngakho-ke yenza isihloko esikhazimulayo uma wena nomngane wakho onoboya nithokozela ukuhlangana ndawonye.
UHaddi - Lokhu kugcinelwe ama-canines apholile kunawo wonke! I-Haddi isho ukuthi 'ithambo' ngesi-Hindi - ngakho-ke, kusobala ukuthi izokhetha ngokukhalipha i-mutt enkulu enamabhondi, okungenzeka ukuthi ithokozela ukudla okulula ethanjeni lezinja ngezikhathi ezithile. Kungani ungaphonseli inja yakho elinye ithambo bese uyinika le moniker?
I-Indra - Ngabe wena mngani onemilenze emine uthole ubuntu obukhanyayo noma obungenazimpawu? Siyazi ukuthi yonke inja inezici ezihlukile, yingakho sizithanda! Kepha, uma ubuntu benja yakho bunemibala egqamile, khona-ke leli igama lenja kubo! I-Indra isho ukuthi 'uthingo lwenkosazana' ngesiSanskrit.
UJihan - Lona uphume ngempela kulo mhlaba! UJihan usho ukuthi ‘umkhathi womhlaba.’ Uma ungumlandeli omkhulu wesikhala noma i-sci-fi ke leli elinye lamagama ezinja zaseNdiya amahle kakhulu kuwe!
Kumar - Nasi isihloko se-pooch othanda izinto ezinhle kakhulu empilweni! I-Kumar isho ukuthi 'iNkosana' ngesi-Sanskrit futhi ingasho nokuthi 'indodana'. Sicabanga ukuthi lokhu kuzokwenza ukukhetha okubambekayo kumngani onoboya othanda ukuphathwa njengendlunkulu !
I-Lalit - I-Lalit ngokwezwi nezwi isho ukuthi 'muhle.' Ngakho-ke, leli yigama elihle lenja yaseNdiya kunoma iyiphi inja ebukeka kahle kodwa mhlawumbe ilungele kakhulu inja yokubonisa. Ucabangani?
Lamba - Igama elithi Lamba lisho ukuthi 'ubude' ngesi-Hindi. Manje, siyazi ukuthi lokhu kungazwakala kusobala, kepha akukhona yini ukukhetha kwe-pawfect kwenja enhle ye-Weiner? Ama-Dachshunds adume ngemizimba yawo emide, ngakho-ke kungani ungawaniki igama elifushane, elinencazelo ende?
Izandla - Siyazi ukuthi i-pup yakho ingomunye wabantu ababaluleke kakhulu empilweni yakho. Ngakho-ke kungani ungabaniki igama elikhombisa lokhu ngempela? UMani usho ukuthi ‘itshe eliyigugu’ ngesiSanskrit, futhi yini engaba yigugu ngaphezu kwedayimane noma irubi? Ingani, umngane wakho onoboya kunjalo!
INirvana - Igama elithi Nirvana litholakala ezinkolweni eziningi emhlabeni wonke, kepha-ke ligqame kakhulu eNdiya! KubuBuddha nakumaHindu (izinkolo ezidumile eNdiya!) INirvana yisimo sokukhanyiselwa esiphakeme kakhulu umuntu angafinyelela kuso. Lokhu kungaba kuhle kumlingani we-canine ohlakaniphile noma opholile ngempela.
UNirav - Leli igama lenja yaseNdiya elikhazimulayo le-mutt elithanda ukusnuza! INirav isho ukuthi 'ukuthula nokuzola' ngesiSanskrit, ngakho-ke kungafanelana nempokotho ekhetha umcamelo wokudlala! Sicabanga ukuthi lokhu kungenza i-moniker enhle yenja endala, ethanda nje ukuzigoqa phambi komlilo.
Isizinda - I-Parth (nakho konke ukuhluka okufana ne-Parthos ne-Partha) kuvela emvelaphi yaseNdiya futhi empeleni ixhunywe ku-Arjun. INkosana u-Arjun wayevame ukubizwa ngokuthi yiParth. I-Parth isho ukuthi 'inkosana eyiqhawe' futhi ngokwezwi nezwi isho ukuthi 'ongalokothi aphuthelwe yilitshe'.
URaj - Leli gama lenja liphinde lasuselwa ku-Sanskrit futhi lisho ukuthi 'Inkosi'. Kodwa-ke, futhi kuyisiqu sasebukhosini baseNdiya, okusho ukuthi 'umthetho' ngakho igama ngokwalo linezincazelo eziningana zobukhosi.
I-Rohit - Lokhu kungukukhetha okuhle ngenja enebhantshi elinombala wethusi noma obomvu ! I-Rohit yiSanskrit 'ebomvu' - ngakho-ke igama lenja yaseNdiya elingokoqobo! Sicabanga ukuthi le nketho izolungela ikakhulukazi i-Red Setter.
Imininingwane - Inketho e-fab-fur-lous yomngani wakho onobuhle obuhle futhi onobuqili. Igama elithi Sakari lisho ukuthi 'muhle' ngakho-ke kuyindlela engcono kakhulu nganoma iyiphi i-pooch engenakuphikiswa .
Ingqikithi - Igama elidumile laseBangali! Kodwa-ke, sicabanga ukuthi leli ngelinye lamagama wezinja zethu eziyintandokazi zaseNdiya ohlwini. I-Sumit isho ukuthi 'umngani omuhle,' okwenza lokhu kube ukukhetha okuhle kakhulu kumngane wakho we-canine. Kwenza igama elimtoti impela uma wena kanye ne-pooch yakho ningabangane abahamba phambili .
UTushar - Unayo injana enoboya obumhlophe? Noma, mhlawumbe ulethe umngani wakho omusha onemilenze emine ekhaya phakathi nobusika. Nali elinye igama elimangalisayo lesiHindi neBengali! UTushar usho ukuthi 'isithwathwa,' 'iqhwa,' noma 'ubusika' ngakho-ke angenza igama elikhazimulayo laseNdiya nge-pooch enengubo enemibala eqhwa.
I-Vishal - Nali igama elinencazelo enkulu! I-Vishal isho ukuthi 'omkhulu,' 'omkhulu' futhi 'ubabazekayo'. Ngabe umngani wakho onoboya unobuntu obukhulu? Noma, mhlawumbe zikhona ngokoqobo uhlobo olukhulu lwezinja . Awu, awucabangi ukuthi lokhu kungabafanelekela ngempela?
I-Yasti - Lokhu kwenzelwa zonke lezo zinja ezibushelelezi nezincane lapho. I-Yasti yiSanskrit futhi isho ukuthi 'slim' - ngakho-ke lokhu kungaba kuhle kuzo zonke lezo zinja zezinja ezinokwakheka kwemvelo ukuze zibe nempilo futhi zizace.
Yogi - Cha, asikhulumi ngekhathuni eyintandokazi yawo wonke umuntu, i-Yogi Bear! NgesiSanskrit, i-Yogi yigama elinikezwa umuntu owenza i-Yoga, njengothisha we-Yoga! Lokhu kungenza isihloko esinokuthenjelwa umdlwane - ikakhulukazi ngoba lapho izinja eziningi zolula, kusikhumbuza i-yoga yethu esiyithandayo (noma esesabekayo)!
Sithemba ukuthi uhlu lwethu lwamagama ezinja zaseNdiya kukusizile ukuthi ukhethe igama le-pawfect le-canine yakho.
Ukukhethela i-moniker umdlwane wakho kungumsebenzi onzima, kepha ukukhetha eyodwa ehlukile futhi eyi-quirky kuyindlela enhle yokuzijabulisa phakathi nenqubo.
Noma ngabe uyigugu lamaNdiya noma uthanda isiko labo nje, sinethemba lokuthi uhlu lwethu lokukhetha lukuphonsele ithambo futhi uthole olugqugquzelayo kumlingani wakho we-canine!
Izintandokazi zethu yiDrisana neSumit, kepha-ke, sinendawo ethambile yegama elithi Nirvana ngenxa yokuthi izwakala kamnandi kanjani!
Yiziphi izintandokazi zakho? Sazise esigabeni sokuphawula ngezansi!
IGoberian: Amaqiniso Athakazelisayo ngeGolden Retriever neHusky Mix
ICavapoo: Inja Yakho Emangalisa
Izingxube ezihamba phambili ezingama-32 zaseGerman Shepherd: Uhlu lwe-A kuya ku-Z nezithombe
Konke Okufanele Ukwazi Ngohlobo Lokuzala Inja kaLeonberger
Imininingwane ye-Vizsla Dog Breed & FAQs
Ingabe iChow Chow enjengengonyama inolaka njengoba ibukeka?
Ama-Luck Bringers aseTibet: Ngabe iTibetan Terrier ikulungele?
Izintaba Zentaba: Umhlahlandlela Ophelele Wokuzala (Usayizi, Imidlwane Nesimo Esibucayi)
Konke Odinga Ukukwazi Nge-White Pomeranian
Ukuqeqeshwa KweLabrador Kwabanikazi Abasha: Umhlahlandlela Ophelele
amagama ezinja ezinkulu owesilisa
Imiksi yamalebhu yesibhakela iba nkulu kangakanani
impisi hybrid german umalusi inja
isikhathi sempilo se-maltese shih tzu
izinwele ezinde zezinwele ze-apula chihuahua